शुल्क रहित सदस्यता (फ्री मेम्बरसिप) - NRNA !! - Lekhapadhee
शुल्क रहित सदस्यता (फ्री मेम्बरसिप) – NRNA !!
लेखापढी १३ भाद्र २०७७, शनिबार ०६:०७
गैर आवासीय नेपाली संघमा शुल्क रहित सदस्यता (फ्री मेम्बरसिप) आफैमा नराम्रो कुरा होईन, यो संस्था हामी सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउन हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो। गैर आवासीय नेपाली संघले विश्वभरका देशहरुमा रहेका करिब चालिस लाख भन्दा बढी नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
NRNA मा आबद्धता हुन चाहनेहरुले सदस्यता शुल्क तिर्न नसकेर सदस्यता लिन नसक्ने कुरा चाहि सत्य होईन ।
प्रबासमा रहेका लाखौ नेपालीहरुको आस्था र भरोसा समेत प्रतिबिम्बित गर्ने यहि एक मात्र संस्था हो। NRNA मा आबद्धता हुन चाहनेहरुले सदस्यता शुल्क तिर्न नसकेर सदस्यता लिन नसक्ने कुरा चाहि सत्य होईन । नेपाल र नेपालीहरुको समृद्धि र मुलुकको बिकासको लागि समेत टेवा पुर्याउने पवित्र उदेश्य सहित प्रवासमा स्थापित यस संघले यहॉं रहेका हामी नेपालीहरु सबैलाई संस्थामा जोड्न जरुरी छ ।
शुल्क रहित सदस्यता (फ्रि मेम्बरसिप) वितरण गरेर ठुलो संख्यामा सदस्य बढाउँने हो भने यस संस्थाको गरिमा, आकर्षण र अझ बढी प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न थप उत्साह प्राप्त हुनेछ । शुल्क रहित सदस्यता (फ्रि मेम्बरसिप) बितरणले प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा सदस्यता संख्या बढ्छ, तर राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद तहमा हुने प्रतिनिधित्वको संख्या घटाउन खोज्ने बिषय, सोंच र प्रबृत्ति आफैमा अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी र हास्यॉंस्पद हो । यसबाट प्रष्ट छ, हामी अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदमा कस्तो खालको प्रतिनिधित्वको परिकल्पना गर्दैछौ र कुन लोकतान्त्रिक प्रद्धतिको बिकास गर्दैछौ? राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको सदस्यता संख्याको आधारमा नै अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद तहमा हुने प्रतिनिधित्वको संख्यालाई सोहि अनुपातमा कायम गराउँन जरुरी हुन्छ।
“कुनैपनि संस्थाको जग बलियो भयो भने मात्र केन्द्रीय तह बलियो हुन्छ भन्ने तथ्यलाई अनुशरण गर्नु पर्दछ।” शुल्क रहित सदस्यता (फ्री मेम्बरसिप) बितरणले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरु कसरी आर्थिक रुपमा सबल र बलियो हुन सक्दछन साथै उनीहरुको आवश्यक पर्दा कुन आर्थिक श्रोतबाट स्थानीय वा तल्लो तहमा सहयोग पुर्याउन सक्दछन् भन्ने स्पष्ट खाका आउँनु पर्दछ । हचुवा र सस्तो चुनावी नारालाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा संस्थालाई दीर्घकालिन असर पार्ने खालका निर्णयहरु गर्दै जॉंदा कालाकान्तरमा संस्थाको औचित्यता माथि नै प्रश्न त खडा हुदैन ? सबैले गम्भीर भएर एक पटक मनन पो गर्ने होकी ?
(भण्डारी, गैर आवासीय नेपाली संघ (NRNA) ICC सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)